Fanontaniana lehibe momba ny fanamarinana PRINCE2 no valiana! - ITS
Fanontaniana lehibe momba ny fanamarinana PRINCE2 no valiana!
Taorian 'ny fijerena ny fepetra lehibe dia nametraka olana sasantsasany izahay mikasika ny certification Prince2 ary niresaka tamin' izy ireo mba hahafahanay hifanaraka amin 'ny safidy tena tsara.
1. Inona avy ny tombontsoa goavana amin'ny faneken'ny Prince2?
Ny Certification Prince2 dia ahafahanao mahazo tombontsoa fitantanana tetik'asa Ny aptitudes dia ny olona iray dia afaka mamaha mora foana ny asa tsy misy fikorontanana. Izany dia hampitombo ny fahaiza-manaonao amin'ny sehatra tetikasa samihafa toy ny fitantanana ny mpiasa, ny fampiasana ny harena, ary ny fikarohana loza.
Amin'ny fampisehoana aminao ny fomba tsara indrindra hifehezana ny tetikasa, dia hanorina ny fepetra azonao ampiasaina amin'ny ampahany amin'ny tsara indrindra fikambanana mpiandraikitra ny tetikasa amin'ny planeta.
2. Inona avy ireo lanjan'ny Major Certification amin'ny Prince2?
Toa manondro ny ampahany amin'ny mpiara-miasa tsirairay izay manara-maso ny karazam-baova isan-karazany.
Mora ampiasaina amin'ny tetikasa noho ny dingana mivantana sy ny teboka.
Ny fitantanana mivantana ny tetik'asa dia azo atao tsy ho zakaina rehefa manasaraka ny tetikasa amin'ny tetikasa madinika.
3. Inona avy ireo karazany samihafa momba ny Certification Prince2?
Misy telo certificates Prince2, indrindra:
Fanamarinana ny fanorenana
Professional certification professional
Ny fampianarana fototra Prince2 dia hanampy anao amin'ny fahatakarana ireo hevi-dehibe, hevitra ary paikady ilaina. Rehefa vita ny famerenana ny mari-pahaizana sy ny fanofana ilaina, dia ho afaka amin'ny fianarana manokana ny olona iray.
Ny fandaharam-pianarana manokana dia hanampy anao hahatakatra ireo paikady ampiasaina amin'ny fampiasana ireo rafitra sy teknika Prince2 amin'ny toe-javatra sy tetikasa samihafa. Ity dingana ity dia singa iray miendrika hypothesis ary hevitra mendri-pitokisana.
Ny fahatelo sy farany dia ny mari-pahaizana momba ny matihanina Prince2, izay miezaka amin'ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana tsy manara-dalàna.
Mba hitazonana ny mari-pahaizana ho marihina, dia tsy maintsy mandalo fanadinana ny fanamarinana amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana tsy tapaka mba hamerenana azy indray.
4. Ahoana ny fomba hiomanana amin'ny fanekena ny Prince2?
Afaka mahazo vonona any an-trano ny olona amin'ny alàlan'ny boky Prince2 ofisialy. Ny lehilahy dia tokony hanao ny fandaminana ny fanomanana ary hamaky azy ireo amin'ny lafiny mahaliana. Ny iray dia tsy maintsy mikatsaka ny hitazona zavatra samihafa amin'ny fandaharana. Ny zava-dehibe rehetra dia miankina amin'ny tsirairay.
Azonao atao koa ny manamarina: - Fitsipika feno ho an'ny Certification Prince2
Mitadiava fiofanana matihanina
Fikambanana samihafa manome fiofanana momba ny mari-pankasitrahana amin'ny fanadinana Certification Prince2. Azonao atao ny mitady Internet mba hijerena safidy voaova. Ireo fikambanana ireo dia nihaona tamin'ny mpampianatra, mieritreritra momba ny fitaovana, ny fanamarihana pro sy ny fitsapam-pahaizana mock izay manampy ny fahatakarana ho vonona amin'ny fanadinana.
Alohan'ny fisafidianana ireo fikambanana na mpanolo-tsaina an-tserasera dia mangataha fanamarinana sy rakitsoratra taloha miaraka amin'ny tanjona azonao atao mba hiatrehana ny tranga misy azy ireo ho tsara indrindra amin'ny orinasa.
Torohevitra vitsivitsy hanafoanana ny fanadinana
Vakio ny valinteny mifanaraka amin'izany - Ny fanontaniana dia karazana isan-karazany, noho izany mila mila mandingana ny safidy tsirairay ianao ary mifidy ny tsara indrindra. Ny fomba tokony hataonao dia ny mamoaka ny valinteny tsy azo ovaina indrindra aloha ary aorian'izay dia hanavao ny fomba fanao.
Ny fitantanana ny fotoana no fanalahidy - Ny iray dia mahatratra ora 2.5, ary ny fanombohana ny famerenana ny fanontaniana tsirairay amin'ny fotoana mahamety azy dia fototra.
Manao fitsapana maro mock - Ny fitsapana Mock dia hanampy ny kandidà handray ny tena fahatsapana ny fanadinana, ary miaraka amin'ny fandaharana maro samihafa amin'ny fitsapana mock, afaka manala ny valim-pifidianana sy miomana amin'ny tena izy fanadinana toy izany koa.
Misy fanadihadiana fantatra amin'ny Certification Prince2, izay mbola nijanona tsy namaly? Afaka mangataka fanehoan-kevitra ianao.
PMP vs PRINCE2 vs CAPM: Iza no safidy tsara ho ahy?